U-Yealink UVC20, umngane omuhle we-teleworking [Buyekeza] | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 08/06/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 29/05/2021 13:57 | Gadgets, General, Izibuyekezo
I-Teleworking ifikile futhi kubonakala sengathi ihlala. Izingqungquthela eziningi, izethulo noma imihlangano esiyenza ngocingo ngamaqembu, i-Skype, i-Zoom noma enye indlela etholakalayo emakethe. Kodwa-ke, kulezi zikhathi lapho sibonile ukuthi mhlawumbe i-webcam nemakrofoni yekhompyutha yakho bezingezinhle kangako ...
Kuyadingeka ukwenza ngcono ukusebenza kwekhamera yethu nemakrofoni yethu uma sifuna ukuthola imiphumela emihle, futhi ngenxa yalokhu sinezixazululo ezihlakaniphile. Sibheka ngokujulile ikhamera yewebhu ye-Yealink ye-UVC20, umlingani ofanele emihlanganweni yakho yamaThimba e-Microsoft nokunye okuningi.
3 Sebenzisa isipiliyoni
Kulokhu, ngaphandle komuzwa wokuthi i- emaphaketheni, iqiniso ukuthi umkhiqizo uzuzwe kahle. Yenziwe ngepulasitiki cishe ngokuphelele, sinengilazi / i-methacrylate enamathela kuyo yonke ingaphambili eyinika umuzwa omuhle we-premium. Inzwa engxenyeni engaphambili inakho konke ukugqama ngenkathi imbobo yemakrofoni itholakala ngakwesokudla nangakwesobunxele isimo sedivayisi i-LED. Siyaqhubeka okungenani nohlelo lokuvalwa kwelensi ngokuphelele oluzosivumela ukuthi sithole ubumfihlo.
Izilinganiso: 100mm x 43mm x 41mm
Ngokwengxenye yayo, sinesisekelo esine-hinge system esenza le khamera ibe uhlelo olutholakala cishe kuyo yonke indawo futhi itholakale ngokugcwele kuwo wonke ama-monitors nama-laptops, noma ngabe sifisa ukuthi singasebenzisa ithuba ngentambo yendawo yonke yama-tripods esisekelweni, noma ukuyijabulela system esivumela ukuthi siyishiye ngqo etafuleni. Kunezinye izindlela eziningi elisinikeza zona, ikakhulukazi uma sinaka ukuthi ikhamera iyakwazi ukuziphendulela ngokwayo ngokuqondile nangokuqondile. Ukuguquguquka kwefulegi kule khamera yewebhu ngemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi.
Sizojabulela i-webcam nale Yealink UVC20 enikeza uhla lwe-autofocus oluphakathi kwamasentimitha ayi-10 namamitha ayi-1,5. Sinezintambo ngemuva I-USB 2.0 2,8 amamitha azokwanela cishe zonke izindawo. Noma kunjalo, sekuyisikhathi sokugxila kwinzwa yakho, sinemodeli I-5 MP CMOS enokuvula kwe-f / 2.0 ekwazi ukunikela ngokukhishwa kwevidiyo ku-1080p FHD resolution ku-30FPS njengomthamo omkhulu. Ukuze uthole imiphumela ephumelelayo, ine-autofocus esebenza kahle kakhulu futhi inamandla okuguqulela ukucacisa okuhle nokukhanya.
Idivayisi izohambisana ne- IWindows ne-macOS ngaphandle kwenkinga. Ngokwengxenye yayo, imakrofoni iqondiswa ngama-omni futhi izoba ne-SNR ephezulu engu-39 dB. Imvamisa yokuphendula, yebo, iqinile impela phakathi kwe-100 Hz ne-12 kHZ, imiphumela elondolozayo impela. Asitholanga nkinga emakhono ezobuchwepheshe, empeleni singasho ukuthi simangazwe ikhono leYealink UVC20 lokuletha imiphumela emihle noma ngabe kunezinkinga ezisobala zokukhanyisa endaweni yokubanjwa.
Ikhamera inohlelo lokuxhuma nokudlala ngokuphelele, Lokhu kusho ukuthi ngeke kudingeke senze noma yiluphi uhlobo lokumiswa ngaphambi kokusetshenziswa kwalo, iqiniso lokuthi asinayo ngisho nesoftware engalandwa ngale njongo kufakazela lokhu. Lapho nje sixhuma ikhamera ye-Yealink UVC20 ngechweba le-USB, siyithola iphakathi kwemithombo yomsindo nevidiyo lapho senza amakholi evidiyo ngezinhlelo ezahlukahlukene zale nhloso. Kulokhu sizothola kokubili ikhamera nombhobho wekhamera uqobo ngokwehlukile, okusivumela ukuthi sisebenzise imibhobho yethu uma sifisa.
Sisanda kusebenzisa ikhamera ukuqopha i-podcast yamasonto onke yozakwethu be-iPhone bamanje futhi ungayibona kuvidiyo eshumekiwe. Le yindlela efaneleke kakhulu yokubona ukusebenza kwekhamera, yize kunjalo, kulokhu sisebenzise omunye umthombo womsindo. Ikhamera ine-autofocus esheshayo, engimangaze ngisho nasezimeni ezingekho kahle zokukhanyisa, futhi lokhu kungezinye zezinto ezibaluleke kakhulu okufanele uzicabangele, iqiniso lokuthi i-autofocus izosivumela ukuthi sihambe phambi kwalo ngaphandle kokuhlupheka la magama.
Ikhamera ayishibhile kakhulu, futhi inkinga enkulu engihlangabezane nayo ukuthi ayikho ohlwini njengomkhiqizo otholakalayo e-Amazon. Ungayithola kumawebhusayithi afana Iqondiswe ngqo ngentengo enconyiwe yama-euro angu-89,95, Uma ucabanga ukuthi ngumkhiqizo oqinisekisiwe wamaThimba we-Microsoft ne-Zoom, akubonakali kukuningi.
Ukusebenza yilokho ongakulindela kumkhiqizo onalezi zici, kwenzeka okufanayo ngokuguquguquka okukhulu kwesisekelo sayo kanye nokuthuthuka okusebenzayo kokugxila okuzenzakalelayo phakathi nazo zonke izingcingo zevidiyo, ngaphandle kokungabaza, umkhiqizo esingawuncoma uma ufuna ukuthuthukisa izethulo zakho.
Kuthunyelwe ku: 8 Juni ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: May 29 we-2021
Ukucushwa / Ukusetshenziswa
Idizayini nezinto zokwakha ezizizwa "njenge-premium"
Isisekelo esisebenziseka kalula kakhulu nesisebenziseka kalula
Umphumela omuhle kakhulu wekhamera ne-autofocus
Ngiphuthelwa i-adaptha ye-USB-C
Ambalwa kakhulu amaphuzu wokuthengisa eSpain
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » U-Yealink UVC20, umngani omuhle we-teleworking [Buyekeza]
IHoover H-purifier 700, ukubuyekezwa kwale purifier enkulu yomoya